RASMI: Joel Matip oo heshiis cusub qalinka ugu duugay kooxdiisa Liverpool – Gool FM
(Liverpol) 18 Okt 2019. Daafaca Liverpool ee Joel Matip waxa uu qalinka ku duugay heshiiskan cusub oo kooxdiisa ku sii hayn doona illaa xagaaga 2024-ka.
28-sano jirkaan xulka qaranka Cameroon ayaa dhaliyey labo gool sagaal kulan oo uu u saftay kooxdiisa Reds tartammada oo dhan illaa iyo haatan xilli ciyaareedkan.
Matip ayaa kooxda Liverpool kaga soo biiray naadiga Schalke sanadkii 2016-kii waxaana uu kooxda tababare Jurgen Klopp ka caawiyey inay ku guuleystaan koobka horyaallada Yurub ee Champions League xilli ciyaareedkii laga soo gudbay ee 2018-19.
“Waa dareen wayn inaan qeyb dheer kasii noqdo naadiga, runtii waa uun dareen wayn,” ayuu yiri Matip markii uu heshiiska cusub qalinka ku duugay.
“Marka aad dibadda joogto, waad ogtahay in Liverpool ay tahay koox weyn, laakiin marka aad gudaha ku jirto, kaddib waxaad helaysaa dareen ah sida ay kooxda ugu weyn u tahay dhammaan wadammada, taageerayaashu meel walba ayay joogaan, waa koox aad u weyn, ciyaaryahan waliba wuxuu jeclaan lahaa inuu u ciyaaro.
“Waxaan heysannaa koox da’yar oo hibo leh, waxaana qabaa in qof kasta oo inagga mid ahi uu gaajoonayo, hadda waxaan aragnay sida ay tahay inaan wax ku guuleysanno, waxaanan doonaynaa inaan markale dareenkaasi oo kale helno.”
Matip ayaa seegay labadii kulan ee ugu dambeysay oo Liverpool ay ciyaartay ka hor inta uusan dhaawac soo gaarin, laakiin waxaa la filayaa inuu ku soo laabto kulanka Axadda ay Manchester United ku booqan doonaan Old Trafford.